Olee otú Detuo Music si iTunes ka Flash Drive
> Resource> iTunes> Easy Ụzọ Detuo Music si iTunes ka Flash Drive
"My iTunes bụ oke buru ibu na Akpara m idetuo music si iTunes ka flash mbanye. Dị ụzọ ọ bụla na-ekwe ka m na-idetuo iTunes music ka flash mbanye na songs. Ihe m na-agụ si internet bụ naanị akwado iTunes Library faịlụ : iTunes Library.itl ka flash mbanye. Nke a bụ ihe m na-adịghị mkpa. Iji hụ na nche nke m niile music, ma iTunes zụrụ na dọwara si CD, m ga-idetuo ha si iTunes ka flash mbanye. echiche ọ bụla? "
Ok, ọ bụ eziokwu na mgbe ị chọọ "ndabere iTunes Library ka flash mbanye", ị na-aga na-a otutu eri banyere akwado iTunes Library.itl faịlụ. Na site n'ime nke a, ị ga-mgbe na-esi gị songs si iTunes ka a flash mbanye. Ke ibuotikọ emi, 2 ụzọ na-ẹkenam nyefee music si iTunes ka flash mbanye.
Ngwọta 1: Copy music si iTunes Media nchekwa Flash ike mbanye
Ngwọta 2: Detuo iTunes music ka flash mbanye si ihe iPod / iPad / iPhone
Ngwọta 1. Copy music si iTunes Media nchekwa Flash ike mbanye
Ma youcre maara na iTunes ma ọ bụ, i kwesịrị ịchọta Advanced Mmasị maka iTunes Library mbụ. Ẹkedori iTunes na pịa Dezie> mmasị. Pịa elu taabụ. Site igbe, ị pụrụ ịhụ abụọ nhọrọ: Nọgidenụ na iTunes Media nchekwa haziri na Copy faịlụ ka iTunes Media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na n'ọbá akwụkwọ. Biko ego ha.
Pịa File> Library> Hazie Library. Na Hazie Library mkparịta ụka igbe, ego "inokota faịlụ".
Site na-eme ihe n'elu 2 nzọụkwụ asị, niile mgbasa ozi faịlụ na iTunes Library bụ ichekwa na iTunes Media nchekwa. Na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịga Media nchekwa idetuo niile music Flash ike mbanye. Open Computer, pịa Music na n'aka ekpe na-emeghe iTunes nchekwa n'akụkụ aka nri. Si ebe a, ị pụrụ ịhụ a nchekwa aha dị ka "iTunes Media". Emeghe ya na ị pụrụ ịhụ Music nchekwa. Gị niile iTunes songs na-azọpụta ebe a. Ugbu a, i nwere ike iṅomi ndị Music nchekwa ozugbo na flash mbanye.
Drawbacks: Nke a ngwọta na-achọ nnukwu free ike mbanye ịzọpụta mmezi mgbasa ozi faịlụ. Ọ bụrụ na kọmputa gị free ohere bụ bụghị nnukwu ezu, ị kwesịrị ị na-etinye ngwọta 2. Ma otú a ka oyiri faịlụ.
I nwekwara ike iji TunesGo idetuo music si iTunes ka flash mbanye, ọ bụ fọrọ nke nta otu ụkwụ na ụkwụ "Nyefee Music si PC / Mac ka Smartphones" dị ka n'okpuru video:
Ụzọ dị mfe iji idetuo iTunes music ka flash mbanye na songs bụ iji Wondershare TunesGo na otu onye nke gị iPod, iPhone, ma ọ bụ ọbụna iPad iji nweta ala ka ọrụ.
Nzọụkwụ 1. mmekọrịta iTunes music ka iPod, iPhone ma ọ bụ iPad
Jikọọ gị iPod, iPhone, ma ọ bụ iPad na kọmputa na ẹkedori iTunes. Pịa View> Gosi sidebar. Pịa ngwaọrụ gị na pịa Music taabụ ka mmekọrịta niile songs si iTunes ngwaọrụ gị. Na-ajụ gị na ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 2. Launch TunesGo
Download TunesGo na wụnye ya na kọmputa gị. Ugbu a ma nsụgharị akwado iPhones, iPods, na iPads. Iji nweta ihe Ama, pịa ebe a. TunesGo (Mac) adịghị arụ ọrụ nke ọma na iPod aka 3. Mgbe launching TunesGo, ngwaọrụ gị ga-ahụrụ.
Nzọụkwụ 3. Nyefee iTunes music ka flash mbanye
Pịa Media na isi window nke TunesGo ikpughe Music taabụ. All iTunes music na ị na synced gị na ngwaọrụ nwere ike hụrụ ebe a. Họrọ chọrọ ndị na pịa "Mbupụ na My Computer" site na "Export" ndọpụta ndepụta. Na ọhụrụ window, ahụ gị na flash mbanye na zọpụta ndị a iTunes songs.
Site n'ime nke a, ọ dịghị oyiri ga-mere. Na ihe niile songs bụ ndokwa n'ụzọ kwesịrị ekwesị na otu nchekwa na gị flash mbanye.
Olee otú Detuo iTunes listi ọkpụkpọ iji ihe mpụga ike mbanye
Olee otú Download iTunes Radio Music enweghị Ogo Loss